FA-ga Oo Go'aan Ka Gaadhay Haddii Andy Robertson Lagu Ganaaxayo Aflagaadadii Uu Garsoorihii Burnleyh U Gaystay. - Gool24.Net
FA-ga Oo Go’aan Ka Gaadhay Haddii Andy Robertson Lagu Ganaaxayo Aflagaadadii Uu Garsoorihii Burnleyh U Gaystay.
Difaaca kooxda Liverpool ee Andy Robertson ayaa cadhadiisa xakamayn kari waayay kadib markii uu ka gadooday waxa ay kooxdiisu u arkaysay rekoodhe ay xili danbe ku guulaysteen kulankii Anfield ee ay barbaraha galeen, waxayna kamaradu qabtay Andy Robertson oo cadho wayn kula dhacay garsooraha.
Xidhiidhka kubbada cagta Ingiriiska ee FA-ga ayaa go’aan ka gaadhay haddii Andy Robertson uu ganaax ku mari doono aflagaadadii uu kula dhacay garsoorihii kulankii Burnley ee David Coote.
Garsoore David Coote iyo garsooraha VAR ayaa ku fashilmay in ay Robertson ku abaal mariyaan rekoodhe kadib markii uu Johan Berg Gudmundsson qalad ku galay difaaca bidix ee Reds ee Robertson dhamaadkii kulankan waxayna garsoorka VAR ku sharaxeen in Johan Berg Gudmundsson uu kubbada taabtay inkasta oo uu qalad cad galay.
Haddaba Andy Robertson ayaa ka badbaaday in lagu ganaaxo erayadii kululaa ee uu sida tooska ah ugu canaantay garsoore David Coote waxaana meesha ka baxday shakigii waynaa ee laga qabay in Robertson uu ciqaba kula kulmayo erayadii kamaradu qabtay.
Hadaladii Robertson uu sida cadhada leh ugu yidhi garsoore David Coote waxaa ka mid ahaa: ““Waa ceeb inay taasi noqon weyso rigoodhe” Wuxuuna Robertson hadalkiisa raaciyay kalmado ay ka mid yihiin “f*ck”.
Laakiin Roberson oo u muuqday mid cadhadu ka badatay ayaa garsoore Coote ku sii yidhi: “Sidee ayayna taasi rigoore ku aheyn? Wax aad aragtaa ma jiro, ciyaarta oo dhan waxba maad arag marka laga reebo inaad calaamad hurdi ah siisay daqiiqadii ugu danbeysay. Maxay soo kordhisay inaad ciyaarta garsoore ka noqotaa?. Maxay aheyd sababtii ciyaartaan laguugu dhiibay. Daacad ayaan u hadlayaa”
Hadalkan iyo in kale oo badan ayuu Robertson cadho ahaan ugula dhacay garsoore David Coote laakiin waxa uu ka badbaaday in ganaax la dul dhigo kulamada soo socda isaga oo helay fursad uu ku sii ciyaari karo.
Rekoodhaha uu Robertson u cadhaysnaa in laga diiday waxa uu kooxdiisa Reds ka caawin lahaa in ay sii joogteeyaan guulihii xidhiidhka ahaa ee ay Anfield ugu soo jireen xili ciyaareedkan waxayna noqotay markii ugu horaysay ee ay xili ciyaareedkan barbaro ku galeen Anfield horyaalka Premier league.